तपार्इं कस्तो मुद्रामा सुत्नुहुन्छ ? सुत्ने मुद्राले हुने लाभहरू - तितोपाटी
तपार्इं कस्तो मुद्रामा सुत्नुहुन्छ ? सुत्ने मुद्राले हुने लाभहरू
तितोपाटी – तपाईं सुत्दा कुन मुद्रामा सुत्ने गर्नुहुन्छ ? जुन मन लाग्छ त्यहीचाहिँ नभन्नुहोला । यद्यपि सुत्ने तरिका व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ । बिर्सन नहुने कुरो के हो भने, सुताइको मुद्राले स्वास्थ्यमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसैले यसमा सचेतता अपेक्षित मानिन्छ ।
सुत्दा देब्रे कोल्टो फेरेर सुत्नु फाइदाजनक हुन्छ । यसरी सुत्दा हाम्रो शरीरमा जम्मा भएको/हुने विषाक्त पदार्थ बिस्तारै लिम्फेटिक प्रणालीद्वारा बाहिर निस्किन्छ । यति मात्र नभई, देब्रेतर्फ फर्केर सुत्दा हाम्रो कलेजोमा कुनै दबाब पर्दैन ।
यसले गर्दा पाचनतन्त्रले आराम पाउने गर्छ । अनि हामी राति सुतेका बेला पेट र प्यांक्रियाजले खाना पचाउने काम सजिलै गर्न सक्छन् । देब्रे कोल्टो सुत्दा प्यांक्रियाजबाट एन्जाइम ठीक समयमा निस्किन पाउँछ । अर्कातिर, यसरी सुत्दा शरीरमा रक्तसञ्चार राम्रो किसिमले हुने गर्छ र निद्रासमेत राम्ररी लाग्छ । यसरी सुत्दा थकाइ अनुभव हुन पाउँदैन ।
देब्रे कोल्टो सुत्दा पेटको एसिड माथितर्फ (मुखतिर) नगई तलतिरै बस्छ । यसले गर्दा एसिडिटी वा छातीमा जलनको समस्या हुन पाउँदैन ।
देब्रेतर्फको सुताइका कारण हामीले खाएको भोजन सानो आन्द्राबाट ठुलो आन्द्रासम्म आरामले जान सक्छ । यसैले बिहान पेट सजिलै सफा हुन्छ । गर्भवतीहरूले समेत देब्रे कोल्टो सुत्नु निकै उत्तम मानिन्छ ।
July 11, 2018 1:15 pm | स्वास्थ्य